Gudoomiyaha gobalka Banaadir oo kor u qaadaya shaqada loo hayo bulshada Banaadir – Bandhiga
Gudoomiyaha gobalka Banaadir oo kor u qaadaya shaqada loo hayo bulshada Banaadir
Duqa Muqdisho ahna Guddoomiyaha Gobolka Banaadir Mudane Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan (Eng. Yarisow) oo ka qeyb galay munaasabad looga hadlayay daadajinta adeegyada bulshada oo ka dhacday Degmada Dharkiinleey ee gobalka Banaadir ayuu amray Maamullada Degmooyinka in ay dar-dargeliyaan fulinta adeegyada bulshada.
Duqa Muqdisho ayaa tilmaamay muhiimadda ay leedahay in la xoojiyo dadaallada wadajirka ah ee lagu horumarinayo Caasimadda, iyadoo bulshada isku sxilqaameyso dib-u-dhiska magaalada.
Waxa uu sido kale duqa amray maamulada dagmooyinka in ay sii dardargeliyaan la shaqeynta hay’adaha amniga si looga guuleysto cadowga mar walba u taagan dhibaateynta ummadda Soomaaliyeed.
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir waxuu sheegay in meel wanaagsan uu marayo barnaamijka Is-xilqaan ee Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Mudane Max’ed C/laahi Farmaajo uu ku baaqay, isla markaana ay socdaan dhismaha xarumo muhiim ah oo lagu dhisayo barnaamijkan, iyadoo uu garab socdo qorsheyaal kale oo Caasimadda lagu dhisayo, bulshadana loogu jaheynayo tubta horumarka.
Duqa Muqdisho Mudane Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan (Eng. Yarisow) ayaa sheegay in dariseyntu ay tahay tiir muhiim u ah isdhexgalka bulshada, si ay u yeeshaan hal hadaf oo mideysan oo ku wajahan dib-u-dhiska iyo iskaashigooda.
Munaasabadda ayaa waxaa ka qeybgalay Guddoomiye ku-xigeennada Maamulka Gobolka, qaar kamid ah Guddoomiyeyaasha Degmooyinka, Saraakiil ka socotay Booliska iyo dadweyne isaga kala yimid degmooyinka Gobolka Banaadir.